version 0.8.3 – အဆိုပါ widget ကရဲ့ shortcode
မေ 30, 2012 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု 11 comments
ဒီဗားရှင်းအချို့ bug တွေကြောင့်အဆင့်မြှင့်တင်ပေးထားကြောင်းနှင့်သင်တိုင်အတွင်းရှိ widget ကနေရာခွင့်ပြုanice shortcode အတွက်အထောက်အပံ့ကထပ်ပြောသည်
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: အသေးအဖွဲ, လွှတ်ပေး, ကုဒ်တို
သြဂုတ်လ 2, 2012 တွင် 6:57 ညနေ
ဒီ plugin ကိုဆံပင်ကောက်ကောက်သို့မဟုတ် libcurl တစ်ခုကိုအသုံးပြုလျှင်သင်သည်ငါ့ကိုပြောပြနိုင် ?
သြဂုတ်လ 2, 2012 တွင် 8:31 ညနေ
ငါ phpcurl စာကြည့်တိုက်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်အတူ၎င်း၏ libcurl ထင်
အား Josh ကပြောပါတယ်
သြဂုတ်လ 15, 2012 တွင် 8:45 နံနက်
သြဂုတ်လ 15, 2012 တွင် 11:36 နံနက်
စက်တင်ဘာလ 11, 2012 တွင် 8:37 နံနက်
ကျနော်တို့ shortcode အကြောင်းကိုပိုမိုဘယ်မှာသင်ယူနိုင်?
ဥပမာအားဖြင့်, built-in menus တွေ WP ထဲသို့သွင်းဖို့ဘယ်လောက်?
ငါကိုအသုံးပြုတဲ့အခါအဘယ်ကြောင့်အလံပြသကြဘူး (သာ checkbox ကို)?
စက်တင်ဘာလ 11, 2012 တွင် 12:31 ညနေ
ခင်ဗျားအပေါ်အ shortcodes အကြောင်းအားလုံးကိုအသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် http://trac.transposh.org/wiki/ShortCodes.
က built-in menus တွေအတွင်းပိုင်းသုံးနိုင်မည်ဆိုပါကငါမသိ, သင်မူကား, အစဉ်အမြဲကြိုးစားနိုင်ပါ.
အလံပြသမည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, ပြန်ကြားချက်ထဲမှာ URL ကိုစေလွှတ်မည်ကကျနော့်ကိုကြည့်ဖို့ပျော်ရွှင်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်.
စက်တင်ဘာလ 16, 2012 တွင် 6:42 ညနေ
ဒီမှာ link ကိုဖွင်, သင်အထက်ညာဘက်ထောင့်ရှိ checkbox ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်.
ထိုအခါငါရှိသည် shortcode ဖြစ်ပါသည်
[tp widget က ="အလံ / tpw_flags_css.php"]
စကားမစပ်, shortcodes လောက်သင့်ရဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာကိုသင် widget က၏အသုံးပြုမှုများစွာ၏တစ်ဦးအဖြစ်ဒီဖော်ပြထားခြင်း, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမကအခြားညွှန်ကြားချက်များရှိပါသည်, modify ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ဘယ်လောက်. ဥပမာအားဖြင့်, အချို့သောအလံများကိုဖယ်ရှားဖို့ဘယ်လို, ပုံစံပြောင်းခြင်းအပြောင်းအလဲ, display ကို drop-down, စတာတွေ?
စက်တင်ဘာလ 16, 2012 တွင် 10:16 ညနေ
ကိုယ့်နေဆဲ link ကိုမရ, အကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပုံစံကြိုးစားကျေးဇူးပြုပြီး.
အလံဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ပတ်သက်., ထို widget ကသင်တစ်ယောက်တည်းသာ setting တွင်ထိုသို့ configure လုပ်ထားသောဘာသာစကားများကိုပြသ.
တစ်စက်ဆင်းနှင့်အခြားဝစ်ဂျက်များတဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့ widget က file ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ရွေးချယ်ရလိမ့်မည်, plugin ကို၏ဝစ်ဂျက်များ subdirectory ကြည့်ရှု
စက်တင်ဘာလ 17, 2012 တွင် 6:08 ညနေ
ဝမ်းနည်းပါတယ်, link ကိုထည့်သွင်းမပြုခဲ့. ဒါဟာင် http://bit.ly/QnJWAf
စက်တင်ဘာလ 17, 2012 တွင် 6:18 ညနေ
ကျေးဇူးပြု, ဘယ်လိုငါသည်သင်တို့ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်သင့်ပါသည်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ပထမဦးဆုံးနာမဖြင့်?
ကိုယ့်ကိုအောကျမေ့, အလွန်အချိန်ကြာမြင့်စွာကနေလွန်ခဲ့တဲ့, ငါသည်အ transposh plugin ကို install လုပ်ကတည်းက, က activated သည့်အခါ, ရဲ့ Dashboard ပျောက်ဆုံးမှုအတွက်လက်ဝဲဘက် menu ကို. plugin ကို deactiveated သည့်အခါ, မီနူးကိုပြန်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်. သင်သည်အဘယ်ကြောင့်စိတ်ကူးတစ်ခုရှိသည် Do?
ဒီနေရာမှာတစ်ဦး screenshot င်
စက်တင်ဘာလ 28, 2012 တွင် 6:04 ညနေ
ဒီနေရာမှာအလွန် plugin ကိုရဲ့အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်တိုးတက်ရန်နှင့်ငါ့အားငါ့နဲ့ co-လုပ်သားများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကအကြံပြုပါသည်စေမည့်အကြံပြုချက်များ၏စုံတွဲတစ်တွဲရှိတယ်. (ဒါဟာရှေ့တော်၌အအကြံပြုခဲ့တာစေခြင်းငှါ,, သို့သော်လည်းငါမဆို info ကိုတွေ့ရှိကြပြီမဟုတ်).
1. လျင်မြန်စွာကို manually စာမျက်နှာတစ်ခုပေါ်မှာဘာသာပြန်ဆိုဖို့နောက်တစ်နေ့စာသားပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုကီးဘုတ် shortcut များနှင့်အခြားနည်းလမ်းများကိုအကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်.
2. plugin ကိုနားလည်စေ, e-mail, လိပ်စာများကို, URL များကိုအစဉ်အမြဲဘာသာပြန်ထားသောမဖြစ်သင့်ကြောင်းအခြားအကြောင်းအရာများကို.
3. copy-paste လုပ်တစ်ခုလုံးကိုစာမျက်နှာ၏ဘာသာပြန် Option တစ်ခု Include. တခါတရံပြင်ပအယ်ဒီတာအတွက်ဘာသာပြန်ဆိုဖို့ပိုမိုလွယ်ကူင်, တခါတရံသင်သည်ရှိပြီးသားဘာသာပြန်ချက်အဆင်သင့်ရှိသည်.